आफ्नो तरवार लिनुहोस्! , विश्वव्यापी चर्च अफ भगवान स्विजरल्याण्ड (WKG)
... आत्माको तरवार, जो परमेश्वरको वचन हो (एफिसी :6:१:17)
प्रेरित पावलको समयमा रोमी सिपाहीहरूसँग कम्तिमा दुई फरक प्रकारका तरवारहरू थिए। एउटालाई रोम्फिया भनियो। यो १ 180० देखि २240० सेमी लामो थियो र दुश्मन सेनाका अ of्ग र टाउको काट्न प्रयोग गरियो। यसको आकार र तौलको कारणले, तरवार दुई हातले समात्नुपर्‍यो। यसले सिपाहीलाई एकै साथ शील्ड प्रयोग गर्न असम्भव बनायो र ऊ बाण र भालाहरूका विरुद्ध असुरक्षित रह्यो।
तरवारको अन्य प्रकारलाई माचैरा भनियो। यो छोटो तरवार थियो। यो हल्का थियो र सिपाहीलाई यसलाई छिटो र छिटो ह्यान्डल गर्न सक्षम बनायो। तपाईंलाई केवल एउटा हात चाहिन्छ, जसले सिपाहीलाई ढाल लगाउँदछ। एफिसीहरूलाई लेखेको पत्रमा पावलले यहाँ दोस्रो तरवारको उल्लेख गरे।
आत्माको तरवार, परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको हतियारको एक मात्र आपत्तिजनक आध्यात्मिक हतियार हो, अरू सबै रक्षाको प्रयोग गरिन्छ। यदि ब्लेडलाई छेउमा फर्काइयो भने यसले दुश्मनबाट आएको प्रहार विरूद्ध पनि हामीलाई बचाउन सक्छ। तर यो एक मात्र प्रकारको हतियार हो जसले वास्तवमा हाम्रो शत्रुलाई समातेर हराउँछ, जो अन्तमा शैतान हो।
प्रश्न यो छ, हामी कसरी आफ्नो जीवनमा यो तरवार अभ्यास गर्न सक्छौं? यहाँ परमेश्वरको वचनको बारेमा केहि मूल सिद्धान्तहरू छन् जुन हामी सक्रिय रूपमा लागू गर्न सक्दछौं:
सक्रियपूर्वक परमेश्वरको वचनको बारेमा उपदेश सुन्नुहोस्। - मण्डलीको नियमित रूपमा परमेश्वरको वचन सुन्न सुन्न आउनुहोस्।
परमेश्वरको वचन पढ्नुहोस् - सम्पूर्ण सन्देश बुझ्न बाइबल पढ्न समय निकाल्नुहोस्।
परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नुहोस् - पदहरू पढ्नु भन्दा गहिरो जानुहोस्। मूल प्रापकको लागि अर्थ पत्ता लगाउन सुरू गर्नुहोस् र यसलाई तुलना गर्नुहोस् कि तपाईं कसरी आज परमेश्वरको वचन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
भगवानको वचनमा मनन गर्नुहोस् - तपाई के पढिरहनु भएको छ सोच्नुहोस्, चाउनुहोस् र तपाईले पढ्नु भएको कुरामा ध्यान दिनुहोस्। अर्को शब्दहरुमा, तपाईको आत्मा र हृदयले परमेश्वरको वचनलाई छुन दिनुहोस्।
परमेश्वरको वचन सम्झनुहोस्। हामी जति धेरै परमेश्वरको वचन हाम्रो हृदयमा राख्छौं, हामी कम बाटोमा हिंड्ने सम्भावना कम हुन्छ। परिस्थितिहरूको सामना गर्नुपर्दा र शरीर र वरपरको संसारलाई दिने प्रयास गर्दा हामीले आध्यात्मिक स struggle्घर्षको लागि तयारी गर्नुपर्छ। परमेश्वरको वचनले तपाईको माझमा काम गर्नुपर्दछ र तपाईका विचारहरूलाई दृढताका साथ निर्देशन दिन तयार हुनुपर्दछ।
परमेश्वरको वचन उद्धृत गर्नुहोस् - तयार हुन र जवाफ दिन सक्षम हुनुहोस् जब र जहिले पनि आवश्यक।
यी सबै क्रियाकलापहरू परमेश्वरको वचनसँग सम्बन्धित छन् केवल ज्ञानको लागि ज्ञान मात्र होइन। यो ज्ञान प्राप्त गर्ने बारेमा हो, बाइबललाई कसरी व्यवहारमा राखिन्छ भनेर बुझ्ने ता कि हामी यो हतियार दक्ष र उचित रूपमा प्रयोग गर्न सक्दछौं। हामीले आफूलाई आत्माको तरवारले डोर्याउन, यस हतियारको प्रयोगसँग परिचित हुनुपर्दछ, र निरन्तर परमेश्वरको मार्गनिर्देशन खोज्नुपर्दछ। हामीसँग बुद्धि माग्नुहोस् जहाँ हामीसँग बुद्धि छैन। हामी परमेश्वरको वचनलाई बेवास्ता गर्न चाहँदैनौं, अन्यथा हाम्रो तरवार हाम्रो शत्रुलाई कुल्चिनेछ। यदि हामीले हतियार, तरवारलाई प्रभुले ठीकसँग प्रयोग गर्नुभयो भने हामी यो आध्यात्मिक लडाईमा विजयी हुन सक्दछौं।
पिता, तपाईंले हामीलाई तपाईंको वचन अजेय स्रोतको रूपमा दिनुभयो। हाम्रो जीवन यस भरियोस्। तपाईंको वचनलाई बारम्बार स्वीकार्न हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्। हामीले सामना गर्ने आध्यात्मिक लडाईहरूमा तपाईंको शब्द प्रभावकारी र बुद्धिले प्रयोग गर्न हामीलाई अनुमति दिनुहोस्। येशूको नाममा, आमेन।